Shirkada Ryanair oo yareysay duulimaadyadii Sweden | Somaliska
Shirkada Ryanair oo yareysay duulimaadyadii Sweden
Shirkada diyaaraha raqiiska ah ee Ryanair ayaa shaacisay in ay yareyn doonto duulimaadyada ay ku samayso Sweden. Ayroboorada ay Ryanair ka yareyn doonto duulimaadyada ayaa waxaa ka mid ah Göteborg, Nyköping iyo Västerås. Waxay sidoo kale guud ahaan joojin doontaa duulimaadyadii ka bixijiray magaalada Karlstad.
Sababaha ka dambeeya joojinta iyo yareynta duulimaadyada ayay shirkadu ku sheegtay in ay la xiriirto arimo dhaqaale. Waxaa ka mid ha in ay shirkadu go’aan ku gaadhay in ay xooga saarto qaybaha kale ee Yurub sida Talyaaniga iyo Ireland.
Shirkada Ryanair oo ka mid ah shirkadaha diyaaradaha kuwa ugu raqiisan ayaa lagu eedeyaa tayo la’aan iyo amaan daro.
Sweden oo ka digtay safarka Tunisia
Gabadh Muslim ah oo lagu qasbay in ay hilib doofaar cunto
War degdeg ah: Mudaharaadka 4 May